डाक्टर केसीको अवस्था जटिल, सरकार मौन « 24 news times
प्रकाशित मिति : 15 Jul, 2018
काठमाडौं – जुम्लामा अनशनरत डा.गोविन्द केसीको घाँटी र नसामा संक्रमण देखिएको छ ।
१५ दिनदेखि कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लामा अनशनरत डाक्टर केसीको स्वास्थ्य अवस्था जाँचका क्रममा घाँटी र हातका नसामा संक्रमण देखिएको हो । स्लाइन दिन खोलिएको केसीको हातको नसामा संक्रमण भएपछि सुन्निएका छन् ।
घाटी संक्रमणले केसीको घाँटी दुख्ने, खसखसाउने र खोकी लाग्ने समस्या देखिनुका साथै आवाज पनि सामान्य परिवर्तन भएको छ । एन्टिबायोटिक्स प्रयोग नगर्ने केसीको अडानका कारण स्वास्थ्य अवस्था थप नाजुक बन्दै गएको छ ।
डाक्टर केसीको बिगँ्रदो स्वास्थ्य अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै अनशन स्थलमा इमर्जेन्सी म्यानेजमेन्टका लागि चाहिने आवाश्यक उपकरण र औषधि तयारी अवस्थामा राखिएको छ ।
डाक्टर केसीले सरकार वार्तामा आएर आफ्ना माग पूरा गर्न तयार हुनुपर्ने अडान जारी राख्नु भएको छ । सरकार जुम्लामा आएर वार्तामा नबसे आफू काठमाडांै नफर्कने केसीको भनाइ छ ।
हरेक पाइला-पाइलामा झुठ बोल्ने गर्छन् यस राशिका मानिसहरु ! हेर्नुहोस् झुठ बोल्न माहिर रहने राशिहरु !
हरेक पाइला-पाइलामा झुठ बोल्ने गर्छन् यस राशिका मानिसहरु ! हेर्नुहोस् झुठ बोल्न माहिर रहने राशिहरु
मदिरा मिसिएकाे ‘ककटेल’ अाइसक्रिम खाने हाे ?
एजेन्सी । हुनतः मादक पदार्थयुक्त आइसक्रिम लामो समयदेखि बजारमा पाइन्छ । तर, त्यो खाँदा मान्छे
सावधान यस्ताे अवस्थाका व्यक्तिले लसुन पटक्कै खानुहुँदैन ! जानिराख्नुहाेस्
लसुनले हाम्रो खानालाई मीठो बनाउन मात्रै होइन, यसमा पाइने धेरै किसिमका पौष्टिक तत्वहरूले हाम्रो शरीरलाई
महभिर झरनाको फेदीमा कृतिम पोखरी निर्माण
म्याग्दी, असार १८ – म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–७ हिस्तानको महभिर झरनाको पर्यटन विकासका लागि पूर्वाधार निर्माण